अमेरिकाद्धारा युरोपका मुलुकसँगै युके आयरल्यान्ड सहित ५२ देशमाथी प्रतिबन्ध: यति धेरैको मृत्यु ! – " सुलभ खबर "
अमेरिकाद्धारा युरोपका मुलुकसँगै युके आयरल्यान्ड सहित ५२ देशमाथी प्रतिबन्ध: यति धेरैको मृत्यु !
बीबीसी । अमेरिकाले युके र आयरल्याण्डमाथीपनि प्रतिवन्ध लगाएको छ । यसअघि नै युरोपेली देशहरुमाथी प्रतिबन्ध लगाएको थियो । प्रतिबन्ध मंगलबारदेखि शुरू हुने उप राष्ट्रपति माइक पेन्सले घोषणा गरे । राष्ट्रपति ट्रम्पले यसअघि नै युरोपेली देशहरूमा यात्रा प्रतिबन्धको घोषणा गरेका थिए । आज पेन्सको घोषणामा अमेरिकी नागरिकलाई निःशुल्क कोरोनाभाइरस परीक्षा प्रदान गरिने समेत उल्लेख छ । सोही घोषणामा बोल्दै राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले भने कि उनले मैले आफैलेपनि कोरोना भाइरस जाँच गराइसकेको छु । ४८ घण्टामा नतिजा आउँनेछ ।
अमेरिकामा कोरोना भाइरसबाट २४८८ जनामा संक्रमण देखिएको छ भने ५१ व्यक्तिको मृत्यु भएको सरकारले पुष्टि गरेको छ। विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) का अनुसार, १२३ देशहरूमा १३२५०० भन्दा बढी मानिसहरूको उपचार भइसकेको दावी गरेको छ । डब्ल्यूएचओ यो भन्छ कि युरोप अब भाइरसको केन्द्रबिन्दु हो । जुन चीनमा उत्पन्न भयो। इटालीको नेतृत्व स्पेनसहितमा भाइरसविरुद्ध लड्न सोमबारदेखि १५ दिने राष्ट्रिय आपतकाल लकडाउन घोषणा गरेको छ । अमेरिकालेपनि राष्ट्रिय आपतकाल घोषणा गरिसकेको छ ।
कसरी अमेरिकाको यात्रा प्रतिबन्ध बढाइदैछ ?
शनिबार बिहानसम्म अमेरिकाले २६ उच्च संक्रमित देशहरू २२ ईयु सदस्य राष्ट्रहरू र चार गैर यूरोपीय संघका राष्ट्रहरूबाट ३० दिनका लागि यात्रामाथी प्रतिबन्ध गरिसकेको छ। तिनीहरू अस्ट्रिया, बेल्जियम, चेक गणराज्य, डेनमार्क, एस्टोनिया, फिनल्याण्ड, फ्रान्स, जर्मनी, ग्रीस, हंगेरी, आइसल्यान्ड, इटली, लाटभिया, लिच्टेनस्टीन, लिथुआनिया, लक्जमबर्ग, माल्टा, नेदरल्याण्ड, नर्वे, पोल्याण्ड, पोर्तुगाल, स्लोभेनिया, स्लोभेनिया, स्पेन हुन् ।
स्विडेन र स्विजरल्याण्डपनि यसमा परेका छन् । यात्रामा प्रतिबन्ध युरोपेली मुलुकसँग कुनै परामर्श नगरी लगाएको भन्दै राष्ट्रपति ट्रम्पमाथी आक्रोश पोखेका थिए । उनीहरुले बेलायत र आयरल्याण्डमाथी छुट दिएको भन्दै ट्रम्पको आलोचना गरेका थिए । तर शनिबार उनले बेलायत र आयरल्याण्डमाथीपनि प्रतिबन्ध लगाए । बेलायतमा कोरोनाबाट अहिलेसम्म २१ जनाको मृत्यु भएको छ भने ११४० जना संक्रमित भइसकेको पुष्टी भएको छ ।